कहाँ पुग्छन् हराएका महिला ? |
कहाँ पुग्छन् हराएका महिला ?
प्रकाशित मिति :2017-08-01 16:04:04
सुनसरी । इटहरीकी २१ वर्षीया गौरीकुमारी चौधरी हराएको दुई बर्ष वित्यो । अहिलेसम्म उहाँको पत्तो लाग्न सकेको छैन । दुई वर्ष अघिकै चैत ४ गतेदेखि सप्तरी राजविराजकी रीताकुमारी राउतको पनि अत्तोपत्तो छैन । खोटाङको खार्मीबाट १६ वर्षकी धञ्जु विश्वकर्मा वेपत्ता भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । यी तीन जना मात्र होईन गएको एक वर्षको अवधिमा पूर्वाञ्चलबाट हराएका १ हजार २ सय २१ जना महिलाको अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।
गत वर्ष साउनदेखि २०७४ असार मसान्तसम्ममा पूर्वाञ्चलका १४ जिल्लाबाट १ हजार ३ सय ९० जना महिला हराएको प्रहरीमा उजुरी प¥यो । ती मध्ये १ सय ६९ जना मात्र फेला परेका छन् ।पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार १ हजार २ सय २१ जना हराएका महिला कहाँ छन् पत्तो लाग्न नसकेको हो । एक वर्षको अवधिमा सवैभन्दा बढि मोरङ जिल्लाबाट ३ सय ७४ जना महिला हराएको उजुरी परेको छ ।
दोस्रोमा झापाबाट २ सय ९१ जना र उदयपुरबाट ९७ जना महिला हराएका छन् । सो अवधिमा ३ सय ३९ जना पुरुष हराएका छन् । ती मध्ये ३४ जना फेला परे । एक वर्षको सोही अवधिमा ३ सय २७ जना बालिका हराएकोमा ७० जना मात्र फेला परेका छन् । एक वर्षमा हराएका १ सय ४९ जना बालक मध्ये ३९ जना मात्र भेटिएका छन् । हराएका ती महिला कहाँ छन प्रहरीमा कुनै जानकारी छैन ।
माइती नेपाल काँकडभिट्टाले गत वर्ष २६ हजार ३ सय ६० जनालाई पूर्वी नाकाबाट सम्झाई बुझाई परामर्श दिएर घर फर्कायो । सन् २०१७ को अहिले सम्ममा १० हजार ७ सय ९९ जनालाई फर्काएको छ । फर्काइएका सबैजसो महिला नै छन् । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय झापामा १ सय १९ जना महिला हराएको उजुरी परेको कार्यालय प्रमुख गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । तर ती मध्ये अहिलेसम्म ४० जना मात्र भेटिएका छन् ।
गत वर्ष माइती नेपाल झापामा १ सय ५४ जना महिला हराएको उजुरी परेकामा ४० जना मात्र भेटिएका थिए । माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रमुख गोविन्द घिमिरे हराएका महिला भारतको यौन बजारमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । केही नेपाली महिलालाई दलालले बंगलादेश पनि पु¥याएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भारतमा घरेलु कामदार र सर्कसमा काम गर्नका लागि समेत बेचिने गरेको पाइएको छ । प्रहरीमा महिला हराएको उजुरी आउने तर भेटिएको जानकारी भने नदिने गरेका कारण पनि हराएका महिलाको संख्या बढि देखिने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।